ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၁၂)
ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၁၂)
ကိုပြည့်စုံအောင် (ခ) ဖိုးသား (www.apymt.com) ၏ ပြည်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု
ညီ့ရဲ့ မတောက် တစ်ခေါက် အသိနဲ့ အကြံပြု ရေးသားလိုက်ပါတယ်..။ ပိုတာနှုတ်၊ လိုတာ ဖြည့်လို့ အမှားတွေ ရှိရင်လည်း ပြုပြင်ပေးပါဦး အစ်ကို..။
၁) ကိုဝိ ရေးသားတဲ့ သံဃာတော်များ သာသနာကို ၀င်ရောက်လာရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၄) ချက်ကို ဖတ်ရုံနဲ့ သံဃာတော်များ အနေနဲ့ မိမိတို့သည် ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို ပါဝင်နေတယ် ဆိုတာ သိပြီး ဖြစ်မှာပါ အစ်ကို..။ ဒါသည်လည်း အစ်ကိုက တီထွင်ဖန်တီး ရေးသားလိုက်တာ မဟုတ်ဘဲ နဂို ရှိရင်းစွဲကိုပဲ ပြန်ပြီး သတိထားမိအောင် အသိပေး ရေးသား မှုမျိုးပါ..။ အမှန်ပြောရင်တော့ ကြိုက်တဲ့သူက ရာခိုင်နှုန်း အတော် နည်းမှာပါ..။ ဒါပေမယ့်လည်း လူထွက်ချင်တဲ့ သံဃာတော်များ အတွက်တော့ အစ်ကိုရဲ့ ဆွေးနွေး ရေးသားချက်က အားပေးသလို မဟုတ်ဘဲ အားဆေး သဖွယ် ဖြစ်မယ်လို့ ညီထင်ပါတယ်..။
၂) လူထွက်ချင်တဲ့ သံဃာတော်များ အနေနဲ့ လူမထွက်ရဲတဲ့ အကြောင်း အစ်ကို ရေးထားကိုလည်း ညီ ဂရုတစိုက် ဖတ်မိတယ်..။ ညီ့ မြို့မှာလည်း ကြုံဖူးတယ် အစ်ကို..။ ညီတို့ လမ်းထဲကနေပြီး အစ်မ တစ်ယောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို နှစ်လုံး သုံးလုံး သွားရောင်းရင်း အဲဒီ ကျောင်းက ဦးဇင်း လူထွက်ပြီး အဲဒီ အစ်မနဲ့ ယူသွားတဲ့ အဖြစ်မျိုး..။ လမ်းထဲက လူတွေကတော့ အဲဒီ အစ်မကိုကော အဲဒီ ဦးဇင်းကိုကော အပြစ်ပြောချင် ကြတာပေါ့..။ နောက်ပြီး လမ်းထဲက အိမ် တော်တော်များများ ကလည်း ဒီဦးဇင်း ဆွမ်းခံ ကြွတဲ့ အိမ်တွေဆိုတော့ ဦးဇင်း လူထွက် အတွက်လည်း မျက်နှာ ပူစရာပေါ့ အစ်ကို..။
အရင်က ညီလည်း အပြစ်မြင်တဲ့ လူစားထဲ ပါခဲ့ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ခုတော့ မြန်မာလူမျိုး တွေရဲ့ အဲလို သူများ အပြစ်သာ မြင်တတ်တာကို ခဏထား.. လူသား အချင်းချင်း စာနာတတ်တဲ့ အသိနဲ့ ကြည့်ရင်ကို ဒီ အပြစ်မြင်မှုက လျော့ပါးသွား ပါပြီ..။ ဟုတ်တယ်လေ.. အစ်ကို ဟို ဦးဇင်းလည်း လူသား တစ်ယောက်ပဲ.. သူ့ခံစားချက် သူလုပ်ချင်တာ တွေကို အကောင် အထည် ဖော်ခွင့်တော့ ရှိတာပဲ အစ်ကို..။ အပြစ်ပြောကြတဲ့ လူတွေကို ခြုံကြည့်ရင်လည်း မိမိတို့ မွေးထားတဲ့ သားယောကျာ်းလေးကို တစ်သက်လုံး သာသနာ့ဘောင် ပေးဝင်မလား မေးကြည့်…။ စဉ်းစားကြည့်ရင် အဖြေက အရှင်းကြီးပါ အစ်ကို..။ လောကကြီးက သူများ အပြစ်သာ မြင်တတ်တဲ့ သူတွေက ဒုနဲ့ဒေး ဆိုတော့လည်း အယူအဆ အမြင်တွေ တူဖို့က အခက်သား.. ပဲ အစ်ကိုရေ..။
၃) လောကီ ပညာတွေ ထည့်သွင်း သင်ကြားမှု အပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့တော့ ညီ ခြွင်းချက်မရှိ သဘော ကျတယ် အစ်ကို..။ ဒါပေမယ့်လည်း ညီထင်ပါတယ်.. လူလတ်ပိုင်း အရွယ် သံဃာတော်များပဲ ဒါကို လက်ခံကြလိမ့်မယ် အစ်ကို..။ ၀ါရင့်တဲ့ ဆရာတော်တွေ အနေနဲ့တော့ လက်ခံလိမ့်မယ် မထင်ဘူး..။
နောက်ပြီး ညီမြင်မိတာက.. တကယ်လို့ အဲလို လောကီ ပညာတွေ ထည့်သွင်း သင်ကြားပြီ ဆိုပါစို့..။ ဘာ(what) ဘာသာရပ်တွေကို (တိတိ ကျကျပေါ့ အစ်ကို) သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်း မလဲ..။ ဘယ်သူ (who) တွေက ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဘယ်သူ (who) တွေက သင်ကြားပေးမလဲ.. (အစ ကနဦးမှာတော့ သံဃာအချင်းချင်း သင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးအစ်ကို.. သာမန် လူဝတ် ကျောင်းဆရာ တွေကပဲ သင်ကြားမှ ရမယ်..။ ကျောင်းဆရာမ ဆိုရင်လည်း အဆင်မပြေနိုင်.။ ဒီ အစကို ဖြတ်ကျော် ပြီးရင်တော့ နောက်ပိုင်း သံဃာတော်ချင်း သင်ကြားပေးဖို့က လွယ်ကူသွားပါပြီ။ သင်ကြား တတ်မြောက်ပြီးသူက မတတ်သေးတဲ့သူကို ပြန်သင်စနစ်ပေါ့ အစ်ကို..။) နောက်ပြီး အချိန် (when) ဘယ်အချိန် အတိုင်းအတာကနေ ဘယ်အချိန် အတိုင်းအတာအထိ သင်ကြားစေမလဲ..။ နောက် တစ်ချက်က ဘယ်လို (how) ပုံစံမျိုး သင်ကြားစေမလဲ.. ။
နောက် အဲလို အစကနဦး လူဝတ်တွေက သင်ကြားပေးပြီ ဆိုရင်.. သူတို့ အတွက် ၀မ်းရေးက ရှိနေတော့ လစာ သဘောမျိုးကလည်း လိုလာပြီ အစ်ကို..။ စေတနာ အလျောက် သင်ပေးမယ့် သူတွေတောင် မိသားစုအရေးနဲ့ စားဝတ်နေရေး ၀င်လာရင် ဒီ စေတနာတွေလည်း အရည်ပျော်သွား လောက်တယ်..။ သင်ကြားသူ သံဃာတော်တွေရဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေက ဒီ အခက်အခဲကို တာဝန်ယူ ဖြေရှင်း လှူဒါန်း ပေးသွားရင်လည်း အဆင်တော့ ပြေနိုင်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ရေရှည် အတွက်တော့ စဉ်းစားဖို့ လိုမယ် အစ်ကို..။ ညီရေးတာ အသေးစိတ်တော့ ဆန်သွားမယ် ထင်တယ်.. အစ်ကို..။ ရေးနေရင်း ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်စဉ်းစားမိတာပါ။
၄) နောက်ပြီး အစ်ကိုရေးတဲ့ အထဲက ညီ သဘောကျမိတာက.. “သာသနာတော်ကြီး အတွက် ဆုံးရှုံးမှု၊ အကျိုး ဖြစ်ထွန်း သာယာဝပြော စည်ပင်မှုဟာ ဘယ် Criteria တွေပေါ် အခြေခံပြီး တွက်ချက်မှာလဲ?” ဆိုတဲ့ အချက်ပါ..။ ဒါဟာ မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း စဉ်းစား အဖြေထုတ် သိရှိထားရမဲ့ အချက်လို့ ညီမြင်ပါတယ်..။
သာသနာတော်ကြီး အတွက် အကျိုး ဖြစ်ထွန်းမှုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုလား.. စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုလား..
ဒီအတွက် အဖြေကို အစ်ကို့ ကျေးဇူးနဲ့ ညီဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး ဦးရွှေအောင်ရဲ့ ရေးသားချက်ကိုပဲ ကိုးကား လိုက်မယ် အစ်ကို..။
“သာယာသည်ဆိုရာ၌ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများ ရှိသည်ကို ဆိုသည်မဟုတ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများ ရှိသည်ကိုလည်း ဆိုသည်မဟုတ်။ ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများ ရှိသည်ကိုသာ ဆိုခြင်းဖြစ်၏။
ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု မရှိပါဘဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ များသာ တိုးတက်လာလျှင် လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ များသာ တိုးတက်လာလျှင် လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင် ရာများ နှစ်မျိုးလုံး တိုးတက်လာလျှင် လည်းကောင်း ယင်းသို့ တိုးတက်လာခြင်းသည် လောက၌ ကောင်းသော လက္ခဏာကို မဆောင်၊ သုစရိုက်များ ထွန်းကားမှုကို ဖြစ်ပေါ်အောင် မလုပ်၊ အနိုင်ကျင့် ၀ါဒကိုသာ ဖက်တွယ်တတ် သဖြင့် လောက၌ မကောင်းသော လက္ခဏာကိုသာ ဆောင်၏။ ဒုစရိုက်များ ထွန်းကားမှု ကိုသာ ဖြစ်စေ၏။
ထိုကြောင့် သာယာသည်ဆိုရာ၌ ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာပိုင်း ဆိုင်ရာ ထွန်းကားမှု ရှိခြင်းကိုသာ ဆိုပါမှ မှန်ကန်မည် ဟူ၍ နားလည် အပ်၏။”
ဦးရွှေအောင် ၊ ဗုဒ္ဓ လောကသား တို့၏ အနှိုင်းမဲ့ ကျေးဇူးရှင် ကိုယ်ကျင့်ဗုဒ္ဓ၀င်၊ ရာပြည့် စာအုပ်တိုက်၊ ၂၀၀၃-ခုနှစ်၊ စတုတ္ထအကြိမ်၊ စာ-၂၆၇)
၅) ညီ့အနေနဲ့တော့ အစ်ကို့ ရေးသားချက်တွေက အများ အကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အတွက် ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်..။ ဘာပဲ ပြောပြော ညီတို့ဟာ လူသားတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူသား ကောင်းကျိုးတွေကိုတော့ လုပ်သွားရကြရ မှာပါ..။ လူဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကို လောကတ္ထ စရိယ၊ ဉာတတ္ထ စရိယ၊ ဗုဒ္ဓတ္ထ စရိယ (မြတ်ဗုဒ္ဓကတော့ သူ့အတွက် ဗုဒ္ဓ ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယ.. ညီတို့ အစ်ကိုတို့ အတွက်တော့ အတ္တတ္ထ စရိယ) ဒါတွေကို ဖြည့်ကျင့်ဖို့လို့ သီတဂူ ဆရာတော် ဘုရား ကြီးကလည်း ဆုံးမထား လေတော့.. ညီတို့ အစ်ကိုတို့ တတ်စွမ်းသရွေ့တော့ ကြိုးစား သွားကြတာပေါ့ အစ်ကို..။
၆) ညီ့ အမြင်အရ ဆရာတော် သံဃာတော်တွေ ထဲမှာ လူထွက်ချင်တဲ့ သံဃာတော်တွေ ရှိသလို သာသနာ့ ဘောင်မှာ ပျော်မွေ့နေတဲ့ ဆရာတော် သံဃာတော်တွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ် အစ်ကို..။ အလားတူပဲ ညီတို့ အစ်ကိုတို့လို လူသားတွေ ထဲမှာလည်း လောကီ အာရုံ၊ ကာမဂုဏ်မှာ ပျော်ပါး ခံစားနေသူတွေ ဒုနဲ့ဒေး ရှိသလို၊ လူ့ဘ၀ကို ငြီးငွေ့လို့ သာသနာ့ဘောင် ၀င်ချင်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိနေတာပါ..။ အဓိကကတော့ ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုး ရှိကြတာကို ဆိုလိုချင်တာပါ အစ်ကို..။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပြတ်သား ခိုင်မာမှု မရှိသေးလို့သာ မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ ဘ၀ကို ပုံမဖော်နိုင် သေးတာပါ..။ မိမိရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ မိမိ လုပ်ချင်တာတွေ ပြတ်သားလား၊ မပြတ်သားလား ဆိုတာ ညီ့ကို ဦးဇင်းတစ်ပါး မေးခွန်း ထုတ်ရင်း ဆုံးမသွားတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ချိန်ထိုး ကြည့်နိုင်ပါတယ် အစ်ကို..။ အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ အဲဒီ မေးခွန်းတွေနဲ့ ဆုံးမစကားတွေကို ထည့်ရေးလိုက်တယ် အစ်ကို..။
· ဒီဘ၀မှာ သင့်အနေနဲ့ အလိုချင်ဆုံး တစ်ခုဆိုတာ ရှိလား (တစ်ဘ၀လုံး စာပေါ့.. ပြောရရင် သံသရာအထိ ရည်ရွယ်ထားတာပါ..။)
· ဟုတ်ပြီ.. အဲဒီ အလိုချင်ဆုံးကို သိပြီ ဆိုရင် အဲဒီ အလိုချင်ဆုံး အရာကို ရအောင် ယူနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားလား.. မဖြစ်မနေ ရအောင် လုပ်မှာလား..
· အဲဒီ လိုချင်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ဝံ့ပါ့မလား..။
· ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒီဘ၀မှာ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ လိုချင်လဲ..၊ ကိုယ်လိုချင် သလောက်ကို ရအောင် ယူနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားလား…
· ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် ဘယ်သူမှ မကယ်နိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ တမလွန်ကို စိတ်အေး လက်အေး သွားနိုင်ပါ့မလား..၊ အဲဒီလိုမှ မသွားနိုင် သေးရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ နာမည်လေး ရရုံနဲ့ ဘ၀ကို ထားခဲ့မှာလား…
(ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေဟာ လူသားတိုင်း၊ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ဖြေထားသင့်တဲ့ အဖြေတွေပါ.. တဲ့)
နောက်ဆုံး ဒီဦးဇင်း ဆုံးမသွားတဲ့ ဆုံးမစကားက..
“လူတစ်ယောက်ဟာ သူလိုချင်တာ စစ်မှန်တယ် ဆိုရင် အဲဒီအတွက် ဘာမဆို လုပ်ရဲတယ်၊ တကယ် မလုပ်ရဲသေးတာဟာ တကယ် မလိုချင်သေး လို့ပါ” .. တဲ့ အစ်ကို..
အစ်ကို့အနေနဲ့လည်း *ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား* လို့ ရေးသားထားတဲ့ အတွက် တကယ်တန်း ဖြစ်စေချင်ရင် တကယ် ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ ညီ ယုံကြည်ပါတယ် အစ်ကို..။
* ပြန်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၈
* ပြန်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၉
* ပြန်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၁၀
* ပြန်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၁၁
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:50 AM